Masaajidka ugu weyn Ee Qaaradda Yurub ayaa laga furay Ruushka | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so — September 24, 2015
Masaajidka ugu weyn Qaaradda Yurub, ayaa maanta laga furay Xarunta Wadanka Ruushka ee Magaalada Moscow, iyadoo ay mar qura ku tukan karayan illaa 10 kun oo ruux.
Masaajidkan oo laga hirgeliyay bartamaha Magaalada Moscow, ayaa noqonaya Masaajidka ugu weyn uguna dheer ee Masaajida ku yaala dalalka Yurub, sida uu sheegay Vladimir Putin, Madaxweynaha Ruushka.
Madaxweynaha, ayaa maanta xariga ka jaray Masaajidkan, wuxuuna sheegay Islaamku in uu ka mid yahay dhaqan ahaan diimaha ay dadka Ruushku aaminsan yihiin.
Madaxweynuhu wuxuu ammaanay dagaalka uu Islaamka kula jiro ururada mayalka adag ee dunida ka jira, isagoo tilmaamay dhibaatada ay gaysanayan xagjiriinta inaanay ka turjumayn macnaha Islaamka.
Madaxweynayaasha Turkiga iyo Falastiin, Recep Tayyip Erdogan iyo Mahmoud Abbas, ayaa ka qaybgalay munaasabaddii maanta xariga looga jaray Masaajidkaasi.
Recep Tayyip Erdogan, Madaxweynaha Turkiga, ayaa sheegay in Islaamku uu yahay mid nabadeed, dhinaca kalana wuxuu booriyay tallaabada Masaajidkan looga dhisay Magaalada Moscow. masha allaah waa guul wacan islmka usow huyata allahu akbar allahu akbar guul wacan islmka mala walba aya jogaan masha Allaah.
Next post Kalsoonidda Nafta Waa Guusha Dhabta Ah